CRIMEAN, CIIDDA LUMISO BACRIMINTA IYADA OO LOO MARAYO SALIIN. - CRIMEA
Ugu Weyn Ee Crimea
Crimean, ciidda lumiso bacriminta iyada oo loo marayo saliin.
Crimean, saliideedka carrada ayaa si dhakhso ah u kordhaya, kumanaan hektar ayaa waxay noqonayaan kuwo aan habboonayn wax soo saarka beeraha. Tani waxaa lagu dhawaaqay shirka Guddiga Siyaasadda beeraha, Ecology iyo Khayraadka dabiiciga ah ee loogu yeero Guddiga Gobollada Crimea ee kuxiran by Ku-xigeenka Madaxa Maamulka Degmada Nizhnegorsky Anton Kravets.
Maanta, 20 kun oo hektar oo ah saliideed ayaa laga helay degmada, 9,000 hektar waxay u baahanyihiin gypsum marka hore. Qalabka fosfooraska ah ee gypsum, hordhaca ah ee soo celin kara dhulalkan si loo isticmaalo beeraha, ma jiro Crimea - kuwan waa qashin soo saarka dhirta Krymsky Titan. Saliinisku waa natiijada joojinta biyaha ee biyaha Dnieper iyada oo loo marayo Woqooyi-Koonfurta Suudaan. Burburinta biyo nadiif ah oo ka mid ah beeraha bariiska ayaa kor u kacay taasoo keentay in qaab dhismeedka saliida cusbada ah ee qoto dheer ee xididdada dhirta. Tani waxay cadeeyeen tiro muujinaysa tilmaamayaasha khatarta ah, ayuu yiri Kravets.
Dhulku wuxuu luminayaa bacriminta, dalaggu wuxuu hoos u dhacayaa: sanadaha ugu horreeya ee isticmaalka suufka bariiska, waxay heleen firileyaal 36 boqolkiiba halkii hektar, kadibna 28 sektor halkii hektar, sannadka 2016 oo keliya 16 sektor oo hektar ah. Qofna ma doonayo in uu ka shaqeeyo khasaaro, beeraha Prisivashya waxay ka baddanayaan dalagga hadhuudhka ilaa dalag warshadeed.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Crimea 2019